Barafkii oo gobolada qaarkood ka bilowday. Booliska oo baabuurleyda u digayo. - NorSom News
Home Nyheter/Warcusub Barafkii oo gobolada qaarkood ka bilowday. Booliska oo baabuurleyda u digayo.
Baraf Foto: Vegvesenet.
Habeenki xalay waxaa gobolada Bariga iyo koonfurta dalkan Norway ka da´ay baraf bilow ah, kaas ahaa mid horey loo sii saadaalinayay. Magaalooyinka Kongsberg iyo Netodden ayaa kamid ah meelaha uu xalay ka da´ay barafka uu weheliyo roobka.
Xarumaha booliska ayaa baabuurleyda uga digaya inay ku socdaan taayirka(shaaga) sommerka, waxeyna dadka degan meelaha uu barafka ka da´ay kula taliyeen inay baabuurka ka tagaan, hadii aysan wali aadan badalin taayarka xagaaga, aadana baabuurka ku xirin taayarada xiliga winterka.
Hey´adda saadaasha hawada ayaa saadaalineyso in deegaamada qaarkood uu ka da´i karo baraf gaarayo ilaa 20 cm.
Xigasho/kilde: SNØ FLERE STEDER PÅ ØSTLANDET.
Previous articleNooc cusub oo Corona ah oo Trondheim lagu arkay.
Next articleGuri: Macalimiinta Norway, xor bey u yihiin inay ardeyda tusaan sawirada laga sameeyo nabi Muxamed.